Ihe omume egwuregwu kachasị mma kachasị mma na asọmpi - ULLER
Ndị hụrụ Adventure n'anya maara na adrenaline bụ ihe riri ahụ. Lifenweta ndụ na njedebe egwuregwu na egwuregwu ndị siri ike aghọwo akụkụ dị mkpa nke ndụ kwa ụbọchị nke onye njem ahụ na-eche banyere oge kachasị njọ, ọkachasị mgbe ha sonyere na asọmpi nke ha gosipụtara anyị nka na ikike ha gafere nke ihe ize ndụ.
Kedu asọmpi kachasị njọ?
Na oké egwuregwu ihe, ememme na asọmpi ha dị ezigbo mma! Enwere ọtụtụ n'ụwa, site na nke kachasị obere na nke okike, na nke kachasị ochie na akụkọ ifo. N'ime nke ọ bụla n'ime ha, anyị nwere ike ịgba akaebe ndị dike egwuregwu na nkwa ọhụụ ihu na ihu na-agbagha mgba ike nke okike, ọnụ ọgụgụ kachasị elu, ebili mmiri kachasị njọ, na ụzọ ndị kachasị ogologo na nke dị egwu.
Yoù ma ụfọdụ n’ime ha? Gụ ma mụta maka ụfọdụ mmemme kacha mma na kachasị njọ, ememme na njem asọmpi nke uwa nile!
Ọ bụrụ na ị hụrụ egwuregwu ndị dị egwu na nweere onwe ha n'anya, mgbe ahụ enweghị obi abụọ ị hụrụ egwuregwu X dịka anyị na-eme! Nnukwu anụ a nke asọmpi egwuregwu dị oke egwu jikọtara agụụ, ọrụ na egwu, na-achịkọta ndị ọkachamara egwuregwu sitere n'akụkụ ụwa niile n'ụdị dị iche iche. Ihe a niile n'okpuru nduzi nke otu ESPN, ebe ọ bụ na e kere asọmpi ahụ na 1995.
Kedu ka Egwuregwu X si arụ ọrụ?
na X Egwuregwu a na-arụ ha n'ụzọ pụrụ iche. Ndị asọmpi na-esonye site na ị nweta ọla edo, ọla ọcha na ọla kọpa, yana ego nrite. Agbanyeghị, ha na-asọ mpi maka ugwu nke na-abịa site n'etiti ndị kachasị n'ọkwa asọmpi a, nke mba ụwa niile ama ama.
Dị ka anyị hụrụ na Olympic Games, e nwere abụọ nsụgharị nke X Games: oyi na ndị okpomọkụ. N'ime akwụkwọ mpịakọta nke asọmpi na oge okpomọkụ, anyị na-ahụ Skate, BMX, motocross, Nnwere onwe, ala, rally, scootering (skateboard) na sọọfụ, na moto ọduọ. Na oge oyi X-egwuregwu ị na-asọ mpi na snowboarding, skiing na snowcross.
Ihe ozo di nma banyere X Egwuregwu bụ na mbipụta ya dị iche iche anaghị adịkarị n'otu ebe, ya mere ọ na-adabere na ebe dị iche iche na mbara ụwa, site na California ruo Japan. Na mgbakwunye, agakọtara ya na ememme a ma ama nke na-enye egwu dị ndụ "X Fest" nke na-enye autograph sessions na-eme egwuregwu na ndị ọzọ na-eme ihe nkiri, Fans na ndị asọmpi onwe ha.
ABANCA GALICIA KLASISI SURF PRO
Kedu ihe bụ Pantin Classic?
A na - akpọbu "Pantin kpochapụwo" ma ọ bụ "Galicia Surf Pro", a na - eme Galicia Classic Surf Pro na Pantín osimiri, Valdoviño (nke dị na A Coruña) dị ka akụkụ nke sekit nke World Surf League (WSL).N'ebe ahụ, ndị na-agba ọsọ n'ụwa na-ezukọ ma na-eduzi n'oge ule abụọ dị egwu QS 10.000, nke na-azọrọ na ọ bụ mmeri kachasị mkpa nke mpaghara Europe dum.
El Abanca Galicia kpochapụwo Surf Pro,nke n'afọ ndị na-adịbeghị anya na-arụ ọrụ n'okpuru Praia de Pantín Club (nwere ABANCA dị ka onye na-akwado ya), na-achịkọta sọfụfụ sọfụ ụwa kwa afọ iji sọọ mpi n’ule ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Ndị kacha mma surfers n'ụwa na-eleta ebe a ka asọmpi ma gosipụta ikike ha niile.
Ọ bụ, otu n'ime asọmpi sọfụfụ kachasị atụ anya na Europe niile, ọ na-akwado ihe karịrị 100.000 ndị mmadụ kwa afọ ma na-enye ọnọdụ ezi uche dị na ya nke na-agbagharị kpamkpam na sọọfụ, site na uwe ya na ụlọ ahịa egwuregwu, na ụlọ nri ya na egwu. Eziokwu bụ na ihe omume ha niile dị oke mma, n'ihi na ọ na-abụ asọmpi ma n'otu oge ahụ ememme, na-eme ihe ngosi akara ngosi gụnyere baptizim ha mere sọfụ.
MA Ọ B SE ỌZỌ
O Marisquiño bụ otu n’ime emume ndị kacha mkpa dị n’obodo mepere emepe na ememme egwuregwu na Europe kemgbe e kere ya n’afọ 2001. Ọ bụ mmemme a na-eme ụbọchị atọ n’èzí, nke ihe karịrị mmadụ 160.000 na-anụ ụtọ ya elu iri asọmpi egwuregwu, ihe ngosi ọdịnala, gastronomy magburu onwe ya, asọmpi ịgba egwu, nka na ihe ngosi graffiti, egwu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ihe niile dị na Vigo Maritime Port, dị nso na mpaghara akụkọ ihe mere eme obodo.
Ebee ka a na-eme O Marisquiño?
Ememe O Marisquiño na-ewere ọnọdụ na mpaghara karịa 150.000 square mita n'akụkụ agbata obi akụkọ ihe mere eme nke Vigo, bụ ebe a na-eme nnukwu ule dị ukwuu nke ememme ahụ, n'ihu na n'oké osimiri, ọkachasị na Paseo de las Avenidas, Trasatlánticos Pier, Nautical na the Breakwater. N'ebe ahụ ka a na-egosipụta ebe a na-egosipụta ihe ngosi egwuregwu na nke ọdịbendị nke ọ bụla. Ọ ghọọla ihe omume flagship na obodo a!
El Ma ọ bụ Marisquiño Ọ nwere iko ụwa atọ, World Skateboarding Street, World Skateboarding Miniramp na Dirt FMB World Tour, bụ ndị gbatịrị na nhazi ụwa, yana ebe ndị egwuregwu niile kachasị mma, mba na mba. N'oge na-adịbeghị anya, n'etiti ọzụzụ, agbakọtara FIBA ​​3x3 Nkata ma ha abanyela na ngalaba Gold nke Dirt Jump.
GRANDVALIRA TOTAL ọgụ
Gịnị bụNnukwu agha nke Grandvalira?
Nnukwu agha a na-alụ ọgụ bụ otu n'ime asọmpi snowboard na freestyle ndị ama ama na mba taa! Ọ bụ oke asọmpi na-adọrọ mmasị nke ukwuu n'ihi na a na-arụ ụka maka ikike, aghụghọ na ụdị izizi nke ndị asọmpi, n'ụdị nwoke na nwanyị.
Emere slopestyle snowboard na freeski asọmpi a en Snowpark El Tarter (otu n'ime ogige ndị ọsụ ụzọ na Peninsula) Emepụtara ya na 2005 wee too uto kemgbe ahụ. N'ezie, maka mbipụta ya nke abụọ ọ na - enweta kpakpando atọ na kalenda TTR (Ticket To Ride Tour), akara ngosi benchmark na snowboard mba.
Ma, ọ bụkwa na n’afọ 2009, sekit TTR nyere ya kpakpando! N'oge ahụ, kpakpando 4 ya kpalitere obi ụtọ dị ukwuu na mba ụwa nke mere ọdụ ahụ Grandvalira na eserese. Ihe a niile dabara na mbata ọtụtụ mmadụ agba na ọkwa dị elu na mpaghara, ndị chọrọ isonye.
Nnukwu ọgụ zuru oke nke Grandvalira, asọmpi freestyle kachasị na ndịda Europe, mechara nweta (na 2013) kpakpando 5 ya na mpaghara TTR na snowboarding wee banye na Otu ndi edo edo na sekit nke AFP, Ntughari aka nke mba uwa na freeski.
DAB DAR DA DARI
Zọ Dakar Rally: Kedu ka ọ dị?
N'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya, Dakar Rally abụrụla otu n'ime ọgba tum tum kachasị njọ ma dị egwu n'oge na-adịbeghị anya. Akpọburu "Rally Paris-Dakar", ọ bụ asọmpi ụgbọala kwa afọ nke raide wakporo, Ndị ASO (Amaury Sport Organisation) haziri kemgbe Disemba 26, 1978.
Mgbe asọmpi ahụ malitere, agbụrụ a malitere na Paris wee gwụchaa kilomita 10.000, n'isi obodo Senegal, na West Africa. Agbanyeghị na emesia ọ malitere na Buenos Aires (Argentina), na ngwụcha na 2019 ekwuputara na a ga-eme ya na Saudi Arabia na Middle East yana nkebi 12, puku kilomita ise na oge karịrị njem 7800 na mkpokọta. Ruo ọtụtụ afọ, a ghọtara Dakar Rally dị ka otu n'ime agbụrụ ndị kachasị achọ ma sie ike n'ụwa, nke ndị asọmpi ya gosipụtara nkwalite ha niile, obi ike na egwuregwu n'egwuregwu n'etiti ụwa kacha sie ike n'ụwa.
UTMB TUZO RAIL (ULTRA-TRAIL DE MONT-BLANC)
Obere mmeghe choro Ulta-Trail de Mont-Blanc! A na-eme marathon a mara oke ugwu nke a na-eme kwa afọ na Alps, na-agafe France, wheretali na Switzerland, ebe ihe karịrị 10.000 ndị asọmpi kpuchiri anya nke ihe dịka 172 kilomita na ọdịiche dị mma banyere 10.000 mita. Ndị isi ụwa na-ezukọ na Chamonix kwa afọ yana ndị ọzọ na-agba ọsọ amateur, iji zoo asọmpi 7 nke ihe omume ahụ.
Kedu ihe bụ Montblanc UTMB Ultra Trail dị ka?
Ka ọ dị ugbu a, a maara UTMB dị ka agbụrụ kachasị agba ọsọ na-agba ọsọ niile na kwa ndị kachasị ama. A agbụrụ akụkọ ifo nke na-anọchite anya ya ahụmahụ pụrụ iche! Eziokwu bu na isonye Ọsọ a gburugburu Mont-Blanc bụ, karịa ihe niile, mmelite nke onwe nke na-esite n'ime ime, ebe mbọ, nraranye na nkwalite na-eduga ha ịgafe ma merie ugwu kachasị mma ruo mgbe ha ruru ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ. Ruo ugbu a, ihe ndekọ maka Montblac ultratrail bụ Pau Capell, bụ onye mmeri nke Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) na 20 awa, 19 nkeji na sekọnd asaa.
Ememme mba nke oke egwuregwu (FISE)
Nke a bụ ikekwe asọmpi egwuregwu freestyle kacha mkpa na Europe niile! Jenụwarịenye International Festival of Extreme Sports (FISE) na etiti obodo Montpellier, district Rives du Lez (France), otutu ndị na-eme egwuregwu na ụdị nke Bmx, skate, roller, skateboard, freestyle motocross, wakeboard, ugwu igwe kwụ otu ebe, slackline na igwe kwụ otu ebe. Otu n’ime ihe omume kachasị mma emere maka ndị hụrụ ihe egwu kachasị egwu!
Ọnọdụ nke asọmpi ahụ nwere obi ụtọ, oriri na nkwanye kpamkpam na adrenaline, na-eru ihe nkiri 550.000 na ahụmịhe ụbọchị 5, nke jikọtara n'ụzọ dị egwu egwuregwu kacha mma, nnọkọ oriri, gastronomy, ụlọ ọrụ ihe ọmụma. egwuregwu, concerts na nza nke fun n'ihi na ndị hụrụ oké egwuregwu na freestyle.
IGBOmụrụ na MontpellierNa n'ebe ndịda France na 1997, na mgbe ahụ, dịka nke 2014, FISE World Series malitere, bụ ndị ihe omume ha kacha mma n'egwuregwu a bufere n'ọtụtụ ebe na ụwa.
Kedu ihe bụ Marathon nke ọhịa?
N’etiti agbụrụ dị oke oke na nke siri ike niile, a na-eduzi ndu ahụ Jungle marathon o Marathon nke igbo.Naanị asọmpi maka ndị ọgba ọsọ obi ike na nke kacha akpali akpali nke niile Gịnị kpatara ya? Ọfọn, n'ihi na ọ bụghị marathon nke ndị nkịtị na ndị nkịtị. A na-eme ya otu ugboro n’afọ n’Amazon nke Brazil, bụ́ ebe a na-ahụ ihe ize ndụ ndị dị n’oké ọhịa.
Ndị asọmpi 75 nke marathon na-eche ihu n'oge asọmpi ahụ na ogo dị elu nke na-adaghị n'okpuru 40º na 99% iru mmiri, na mgbakwunye na ịnwe osimiri na agụ iyi na piranhas, ma na-echekwa ahịhịa ahịhịa juru na-enye ohere obere ọkụ ịbata, nke ahụ na-ezobe ọtụtụ egwu egwu, sitere na agwọ ruo na jaguar. Ee nke ahụ dị oke, nri?
A na-eme Marathon Jungle, nke sitere na 2003, na ọnọdụ atọ dị anya: mbipụta kachasị dị mkpụmkpụ bụ 42,2km, mana ị nwekwara ike ikpuchi anya nke 127km kewara ụzọ 4. Ma mgbe ahụ, ụdị ya kachasị ukwuu gụnyere ụzọ nke na-ekpuchi kilomita 254 na mkpokọta, yana esemokwu na ọkwa isii.
N'ime agba ọsọ marathon a, nka, akparamaagwa na nghazi usoro aghaghi idi na elu ha iji lanarie ihe omimi a n'ime otu ihe omuma kachasi nma nke di, dika Amazon.
Ihe kachasị adọrọ mmasị bụ na enweghị ụzọ akọwapụtara n'ụzọ, mana ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ndị asọmpi na-eche ụbọchị isii nke nsogbu nke egwu egwu ruo mgbe ha ruru ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ, nke ha ga-enwerịrị ihe oriri na mmiri ha, Wu ulo nke aka gi ma chere nsogbu nile chere gi n ’oke ohia ihu. Ga-anwa anwa isonye na oke asọmpi a?
OKWU OTU AKW OTKWỌ
Kedu ihe bụ Oke Osimiri Otter?
Kedu ka ị ga-esi kwuo banyere Oke Osimiri Otter! Otu n'ime emume ịgba egwu kacha mma na ememme egwuregwu n'èzí n'ụwa. Emere ya kemgbe 1991 na Fort Ord ochie na Monterey County, California (United States).
A na-akpọ ihe omume ahụ "Classic Otter Classic" n'ụzọ nkịtị na-asọpụrụ otter n'oké osimiri, nke dị na mpaghara ahụ. Na mbipụta mbụ ya, ememme ahụ nabatara ndị na-eme egwuregwu 350 na ndị ọzọ na-ekiri 150. Ugbu a ọ nabatara ihe karịrị ndị egwuregwu 9600 wee gafere ndị Fans 72.500 ndị gbakọtara iji gbaa akaebe kachasị mma nke ịnya igwe ma nwee ọ daysụ ụbọchị 4 jupụtara na njem na ememme ịgba ịnyịnya isi na ụwa.
Site na 1991 ruo 2002, Osimiri Oke Osimiri mere n'oge ọnwa Machị, mana na 2003 ọ kpaliri ụbọchị ya rue Eprel iji mee ka ihu igwe Californian dị ntakịrị.
Gịnị bụ Okpokoro Otter Europe Bike Show Giron?
Enwekwara na Europe Osimiri Otter Europe Bike Gosi na Girona - Costa Brava. Kemgbe afọ 2017 ọ malitere ma sitere n'ike mmụọ nsọ site n'Oké Osimiri Oke Osimiri. O nwere ike bụrụ emume kachasị mma na nke kachasị mkpa nke ememme igwe kwụ otu ebe na Europe maka ndị na-eto eto nwere ọgụgụ isi na ndị ọkachamara guzobere na egwuregwu ahụ.
Kedu ihe bụ Barkley Marathon?
O nwere ike ịbụ na ị nụbeghị ọtụtụ ihe banyere asọmpi a dị egwu ma dị egwu, mana Barkley Marathon ga-abụrịrị otu n'ime ihe omume egwuregwu kachasị njọ, na-achọ ma dị omimi nke ụwa niile! N'ime akụkọ ihe mere eme nke marathon, ọ bụ naanị mmadụ 15 nwere ike mezue njem ha dị egwu ma sie ike nke ọma.
Ọ malitere na 1986 site n'aka onye okike ya bụ Gary "Laz" Cantrell, nke akpọrọ "Lake Lake". Ọ bụ asọmpi dị anya nke karịrị akarị canons nke marathons, na-aghọ ihe omume siri ike na nke kachasi ike n'ụwa.
O nwere ike ịbụ na ị chọpụtalarị ya, ọ bụghị agbụrụ agbụrụ niile, na n'eziokwu ọ bụ ihe iju anya, nke mbụ n'ihi na ndebanye aha ya bụ usoro nzuzo na nke siri ike: naanị site na email na oge na ụbọchị kpọmkwem nye onye okike ya (kọwara gị mkpali na usoro ọmụmụ gị) nwere ike ịnwere ma ọ bụ ghara ịnara ohere iji bụrụ otu n'ime ndị ọgbụgba ọsọ ikike 40 iji sonye na iju Barkley marathon. Na mgbakwunye, ọ na-eme na ụbọchị ịkpọ oku nzuzo, na ebe a na-amaghị ama na steeti Tennessee, USA.
Gịnị mere Barkley Marathon ji esi ike?
Ebumnuche nke Barkley Marathon bụ ikpuchi kilomita 160 na nkwụsịtụ nke karịrị mita 20.000 na njedebe oge nke 60 awa. Asọmpi a nwere okpukpu ise nke ụgbọ mmiri na-akwụghị ụgwọ, nke ebe dị anya kachasị dị mkpa. Ihe kachasị njọ bụ site na enweghị nsogbu, mkpa maka ezigbo igodo na ebe dị na mbara igwe, na ọnọdụ amaghị ama nke ndị asọmpi na-abanye, ebe ọ bụ na ha amaghị ihe ọnọdụ ahụ dị ma ọ bụ ọnọdụ ihu igwe ha ga-eche ihu.
Ihe na-atọ ụtọ ma na-adọrọ mmasị na asọmpi a bụ na akara nke nlanarị na ịdị adị. Ma ọ bụ na na mgbakwunye, ka ị na-aga n'okporo ụzọ ị ga-ahụ onwe gị na ohere iji kpokọta peeji nke akwụkwọ 14 ndị zoro na ebe ahụ, na ndị asọmpi ga-amalite ma nyefee dị ka ihe akaebe na ha emeela ụzọ ahụ n'ụzọ ziri ezi. Na-akpali mmasị ọ bụghị ya?
Enweghi nkwado tupu oge ahụ, ma ọ bụ enyemaka ụdị ọ bụla, na enweghị ebe nlele, ndị ịgba ọsọ iri anọ ahụ na-abanye n'ime okike na ha bib, kompas ma na-ekiri na-enweghị GPS.Nke a bụ naanị ihe ha nwetara n ’nzukọ a tupu ha ebido.
Barkley Marathon Netflix Akwụkwọ
Su ewu ewu amụbawo n'afọ adịbeghị anya, karịsịa mgbe 2014 igba egbe nke Ọsọ Na-eri Nwatakịrị Ya (Agbụrụ nke na-eri oge ntorobịa), ihe nkiri Netflix na-enyocha ma na-egosi asọmpi a dị egwu ma dị egwu. Ga-anwa anwa zitere Lazar Lake email?
You na-eche banyere asọmpi asọmpi dị egwu na ihe omume dịka anyị na-eme? Gwa anyị nke bụ ọkacha mmasị gị!
Naanị ndị kwesịrị ekwesị maka ndị freeriders na obi! Nwee adrenaline niile, agụụ na ihe ọchị site na vidiyo TOP 10 a nke kachasị njọ. You ga-atụ uche ha? Echekwala banyere ya ọzọ wee pịa
Mgbatị ahụ iji wusie ike, ahụ na mmụọ
Usoro mgbatị n'ụlọ, nri na nyiwe iji zụọ ihe n'ịntanetị nke ga - enyere gị aka iwusi uche gị, ahụ na mmụọ gị ike! Akpara anyị ọzụzụ na-ahazi ya na anyị a